गुरु भट्टराईले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेन, कुलमानलाई किन पर्छ ? – iNews16
गुरु भट्टराईले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेन, कुलमानलाई किन पर्छ ?
वर्तमान सरकारले कुनै ऐन वा कानूनमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरेको छैन । यसैकारण सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किरणकुमार श्रेष्ठको पुनः नियुक्ति सरकारले सोझै गरेको थियो । नेपाल रेल्वे कम्पनीमा गुरु भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा ठाडै नियुक्ति दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले रुचाएकाले भट्टराईले कुनै खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिनुपरेन । तर, कुलमानको हकमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ‘कानून हेर्ने’ बताएका छन् । सरकारले चाहेको अवस्थामा कुलमान घिसिङलाई नै फेरि नियुक्ति दिनका लागि कानूनी अड्चन नभएको कानूनविद तथा सार्वजनिक संस्थानका जानकारहरु बताउँछन् ।
Previous प्याजको भाउ बढ्दा ट्रक नै ह’राए
Next कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द विद्यालय असोजदेखि खुलाउने तयारी